यि हुन् ! १३ वर्षका किशोरको मायामा पा’गल भएकी ९ बच्चाकी आमा – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/यि हुन् ! १३ वर्षका किशोरको मायामा पा’गल भएकी ९ बच्चाकी आमा
एजेन्सी, १६ भदौ । ब्रिटेनमा बस्ने हेदी हेपवर्थ नाम गरेकी ४५ वर्षकी एक महिला केही दिन यता चर्चामा रहेकी छिन् । हेदी चर्चामा हुनुको कारण हो उनको माया । वास्तवमा ९ सन्तानकी आमा हेदी सामाजिक सञ्जालमा मामान्डु नामका एक व्यक्तिसँग कुरा गर्थिन् ।
दुवैबीच चिनजानी पछि कुराकानी हुँदै जाँदा माया बस्यो । मामान्डु पश्चिमि अफ्रिकी देश गाम्बियाका थिए । दुईजनाबीचको मायाले आफुले जन्माएका ९ जना छोरा छोरी र पतिलाई छाडेर १३ वर्षका किशोरसँग विवाह गरेकी छिन् । घर, पति र बच्चाहरु छाडेकी हेदीले धर्म पनि परिर्वतन गरेकी छिन् । इस्लाम धर्म मान्ने मामान्डुसँग भा’गेकी छिन् ।
उनीहरु भागेर मस्जिदमा विवाह गरेका छन् । हेदीले मुस्लिम प्रधान देश ब्रिटेनको तुलनामा महिलाहरुलाई इस्लामीकहरुले धेरै खुशी राख्ने र हेरविचार गर्ने बताएकी छिन् । उनले मस्जिदमा गएर नमाज पढ्न थालेकी छिन् । उनका पुर्व पतिले भने हेदीको दिमा’ख प’खालिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
हेदीले १३ वर्षका किशोरले नै आफुलाई रिक््वो’स्ट गरेको र विस्ता’रै वि’स्तारै माया बढेको प्रतिक्रिया दिएकी छिन् । उनीहरुबीच कुराकानी र च्याटिङ सुरु भएको ३–४ महिनामा उनका पुर्व पति एन्डीसँग हेदीको सम्बन्ध टुटेको थियो ।
यी बहिनी मर्निङबाट बच्चा च्यापेर सन्तोष देउजालाई भेट्न चितवन किन आईन ? (हेर्नुस् भिडियो)